Usuku luni lochwepheshe be-PR?
Ikhaya nomndeni, Amaholide
Usuku luni lochwepheshe we-PR ogujwa eRussia? Manje sizoyithola.
Iholide elihle labachwepheshe be-PR ligujwa ezweni lethu maduzane.
Usuku lokugubha usuku lwe-PR
Uqaliswe ngokusungulwa kobuchwepheshe esifundeni sesifundazwe ngoJulayi 28, 2003.
Kusukela kulowo mzuzu ezweni lakithi, ochwepheshe bezobudlelwane bomphakathi bavele ngokusemthethweni . Ngesikhathi esifanayo, isiko sazalwa ukugubha usuku lochwepheshe be-PR ngoJulayi 28.
Uhlobo luni lomsebenzi?
I-PR-ubuchwepheshe idume emhlabeni jikelele. Igama lomsebenzi lo msebenzi liwumphumela wokuhumusha kwesichazamazwi sesiNgisi, esichaza kafushane ubudlelwane bomphakathi.
Ayikho inkampani enkulu engayenza ngaphandle komsebenzi ochwepheshe kule ndawo. Kusukela ekusebenziseni abasebenzi kuncike ekudumeni nasekuthandeni kenkampani phakathi kwamakhasimende angakhona. Umqondo wezenzakalo zokugqugquzela amaphrojekthi ahlukahlukene kanye nokuthuthukiswa kwesithombe samafemu kanye nabantu ngabanye kubangelwa umgomo oyinhloko ochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi. Ngisho nokukhethwa kweziphathimandla zikahulumeni akukhona ngaphandle kokuhlanganyela kwabo. Thumela ngokufanelekile ozobhapathizwa kubakhethi, yenza uhlu oludingekile lwemihlangano nezinkulumo, ukhethe umzila wokuziphatha - umsebenzi we-PR imenenja.
Uma sicabanga ngomlando wezwe, khona-ke abameleli balo msebenzi bangatholakala ngisho nasezweni lasendulo. Ingabe abapristi bezinkulunkulu bamaGreki abazange bafeze imisebenzi yabaphathi be-PR? Bakha isithombe futhi banikeza abantu ngesithombe sezithombe zabo. Izimpawu ze-PR zitholakala kunoma yiliphi izwe kulo lonke izwe lomlando wesintu. Insimbi yakhe eyinhloko ubuciko bokukhuluma kahle, okukwazi ukuhambisa lo mbono kubantu futhi uqondise izenzo ngendlela efanele.
Iminyango yokuqala yangempela yobudlelwane bomphakathi yabonakala eMelika ngasekupheleni kwekhulu lama-19 nelama-20. I-Harvard University ibhekwa njengendlalifa yalolu msebenzi. U-1912 wabonakalisa ukudalwa kwehhovisi lokuqala elisemthethweni ukuze kube nobuhlobo bomphakathi. Futhi ema-30s ekhulu leminyaka elidlule, iDemocratic Party of America yakha indawo yokusebenzela ebizwa ngokuthi "isikhulu sobudlelwane bomphakathi". Kusukela ngaleso sikhathi, ukuphathwa kwe-PR kuthathwa njengomkhakha ohlukile womsebenzi kunoma yimuphi inkampani nenhlangano. Kwavela igama elisha, okusho ukuthi umsebenzi womsebenzi: "u-reeliter."
Ngaphandle kwe-PR abaphathi abakwazi ukwenza!
Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bobudlelwane bomphakathi buqhutshwa ngokujulile ezweni lanamuhla. Ngokumelene nobuncintiswano obunamandla kunoma iyiphi indawo yokukhiqiza, inqubomgomo yokuhweba nezenhlalakahle, ukufunwa kwabachwepheshe balo msebenzi kuhlala phezulu futhi kukhula njalo ngonyaka. Singacabanga ukuthi umsebenzi weziphathimandla zobudlelwane bomphakathi ukukhangisa into yezenhlalo noma ezentengiselwano bese wenza umbono othile phakathi kwabantu. Kodwa, ngokungafani nokukhangisa, i-PR yenza ngokucophelela futhi ngendlela efanele. Uchwepheshe wezinga eliphakeme uyakwazi ukukholisa abantu abaningi abakwaziyo ukuthi bangasebenzisa izinsizakalo zenkampani ethile.
Ngakho-ke, amafemu amakhulu kanye namaqembu ahlukahlukene aqukethe abasebenzi abakhulu abaqashi bomphakathi. Isiqondiso esisha sazala ukukhiqizwa kwamafemu akhethekile ekuhlinzekeni kokuthuthukiswa kwe-PR. Amanye amanyuvesi asungule izingxenye zokuqeqeshwa kule nsimu. Kulabo ababengenayo abazimisele ukuzinikezela kulo msebenzi, umuntu kumele alungiselele umsebenzi onzima nokuthakazelisayo. Ukwaziswa okuningi okuvela ezindaweni ezihlukahlukene zokuphila nokusebenza okungavamile kuyodingeka umuntu ofuna ukufeza isikhundla esiphakeme esigodlweni sokuqasha.
Kuyathakazelisa ukuthi ezweni lethu kuphela usuku lochwepheshe be-PR. Ngokwesiko, izenzakalo zenziwa ngenzuzo yezinkampani kanye nokukhuthazwa kwezinsizakalo zabo. Imihlangano ehlukahlukene kanye nezinkomfa zifaka isandla ekwakhiweni kobudlelwane obusha. Abasebenzi babelana ngolwazi lwabo kanye nentuthuko yabo emkhakheni wezobuchwepheshe be-PR. Imicimbi esemthethweni igcinwe edolobheni ngalinye elikhulu ezingeni lesifunda.
EMoscow, usuku lochwepheshe we-PR luzinikele ezenzakalweni zesilinganiso sonke-saseRussia. Isihloko semikhosi siyashintsha njalo ngonyaka. Siyamema izivakashi ezihloniphekile kanye nezifundiswa ezikwazi ukukhombisa imigomo nezinhloso zabo, okufanele zizame, zikhulise izinga labo. Ukubanjwa nokuhlonishwa kwababameli abafanelekile ukuphatha ubudlelwane bomphakathi kubanjwa.
Ukuthi ingxenye encane yenani labantu liyazi mayelana nokugubha usuku lochwepheshe be-PR alinciphisi ukubaluleka kwalesi sifundo empilweni yethu. Abasebenzi balokhu okukhethekile bayasiza nsuku zonke ekuthuthukiseni izinga lokuphila komuntu ngamunye.
Manje uyazi ukuthi ngoJulayi 28 usuku lochwepheshe be-PR eRussia. Njengoba ubona, iholidini yavela maduzane, kepha ngase ngithandana nabaningi. Ikakhulukazi labo abahlanganyela ku-PR. Laba bantu abanenjabulo enkulu bagubha usuku lochwepheshe be-PR.
Kusasa "Hlala ku-ABC": iskripthi, imithetho yokuthuthukiswa nezincomo zokuqhuba
Usuku Lomfundi Nosuku Lwabafundi
Isimo sosuku lokuzalwa lwama-60 wesifazane
I-Navruz-bairam - iholidi lonyaka! Amasiko wokugubha i-Nowruz
Indlela anakekele rat: okuqukethwe kanye nokudla
Vagoinsulyarnye zinhlekelele: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Isifo se-aphasia - siyini?
Imithandazo kanye kuwo ngemithandazo sesifundo somuntu ezinhle
Wamafutha "Protopic": analogue, imfundo
Fibreboard - impahla esihle ukuze kwakhiwe
Coriander: izakhiwo ewusizo izitshalo kwezokwelapha, ukupheka kanye Cosmetology
"Eskuljus kompozitum": imfundo manual (ukubuyekezwa)
Snegirev Umtholampilo: incazelo, impendulo, kanye nekheli
Kungenzeka yini ukwelapha i-alopecia ne-androgenic? Izimbangela zokuhlunga. Ukufakelwa kwezinwele
Mario Balotelli - impilo enzima futhi umsebenzi odumile wase-Italy inkanyezi Umgadli